Brewing Technology-News-NingBo COFF Machines Co., ltd
Fotoana: 2020-07-10 Comment: 25
Ny famokarana labiera dia vokatry ny labiera amin'ny alàlan'ny famoahana loharano azo avy amin'ny tsiranoka (akora voa serealy) ao anaty rano ary avy eo vao masira amin'ny masirasira. Ny mpamaky labiera no mamita azy io amin'ny labiera, ary ny varotra fanaovana labiera dia ampahany amin'ny toekarena tandrefana. Ny fisotroan-dronono dia nitranga hatramin'ny faha-6 taonan'ny taona talohan'i Kristy BC, ary ny tondro arkeolojika dia manolotra fa io fomba io dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny sivilizasiôna mipoitra manodidina an'i Egypte sy Mesopotamia efa tranainy. Fomba fanodinana labiera: Misy dingana vitsivitsy amin'ny fomba fanaovana labiera, izay mety misy ny malting, ny mashing, ny fanasan-damba, ny fampangotrahana, ny fanamasinana, ny fanamafisana, ny sivana ary ny famonosana. Ny malting no fomba hanamboarana ny varimbazaha hohanina. Ny mashing dia mamadika ny tsaramaso navoaka nandritra ny dingan'ny malting ho siramamy azo aody.
Ny vokatry ny fomba fanoto dia ranoka manankarena siramamy na wort, izay avy eo dia soratana amin'ny alàlan'ny mash tun amin'ny fomba fantatra amin'ny hoe lautering. Ny wort dia afindra ao anaty kaontenera lehibe fantatra amin'ny anarana hoe "varahina" na vilany, izay ampotehina amin'ny fitsambikinana ary indraindray singa hafa toy ny anana na siramamy. Ity dingana ity dia toerana fanehoan-kevitra simika sy mekanika marobe, ary misy fiovana lehibe momba ny tsiro, ny lokony ary ny fofon'ny labiera. Aorian'ilay tadio, ny wort avy eo dia manomboka ny fomba fampampangatsiahana. Ny fomba fanamasinana dia manomboka amin'ny fanampiana ny masirasira amin'ny wort, izay mivadika alikaola, gazy karbonika ary singa hafa ny siramamy.
Rehefa vita ny fanamasinana dia mety afangaro amin'ny labiera any anaty tank vaovao ilay antsoina hoe «container container». Ny fikojakojana ny labiera dia ny fomba fahanteran'ny labiera, lasa mihamalemy ny tsiro, ary manjavona ireo tsiro tsy ilaina. Aorian'ny fametahana mandritra ny herinandro ka hatramin'ny volana maromaro, ny labiera dia mety hosivina ary hasiana karbônika ho an'ny tavoahangy, na hampandoavina lamandy amin'ity tranga ity. Amin'ny vokatra: Ny masirasira masirasira sy ny voam-bary efa lany.
Previous: Ny labiera fanaovana asa-tanana dia lasa malaza any Sina
Next: Na ny nerd labiera aza dia afaka mianatra zavatra amin'ny fitsidihana labiera Bitter Minnesota